Matauriro Atingaita Nevanofurira | Martech Zone
Matauriro Atingaita Nevanofurira
Chipiri, Mbudzi 30, 2021 Chipiri, Mbudzi 30, 2021 Alexander Frolov
Influencer kushambadzira yakakurumidza kuve chinhu chinotungamira chero yakabudirira brand campaign, ichisvika pamusika kukosha kwe $ 13.8 mabhiriyoni 2021, uye nhamba iyoyo inongotarisirwa kukura. Gore rechipiri reCCIDID-19 denda rakaramba richiwedzera mukurumbira wekushambadzira kushambadzira sezvo vatengi vakaramba vachivimba nekutenga online uye vakawedzera kushandisa kwavo masocial media mapuratifomu senge e-commerce chikuva.
Nemapuratifomu akaita se Instagram, uye nguva pfupi yadarika TikTok, vachishandisa yavo yemagariro ekutengeserana maficha, pane mukana mutsva urikubuda wemhando yekushandisa vanofurira kuwedzera maitiro avo ekutengeserana munharaunda.
70% yevashandisi veinternet vekuUS vangangotenga zvigadzirwa kubva kune vavanofurira vavanotevera, pamwe nekukwira kuri kutarisirwa kweUS social commerce kutengeswa ne35.8% kusvika pamadhora mazana mashanu nemakumi matanhatu emadhora muna 2021.
nhamba uye Insider Njere
Asi nekukura kwemikana yekutsigira yevapesvedzera, hazvidzivirike kuti kuwanda kuchapinda munzvimbo yakatozara, zvichiita kuti zvinyanye kuomera mabhureki kuwana anonyatso pesvedzera kushanda naye. Uye kuti kudyidzana kwebrand-brand kuve kwakanyanya kushanda kune vateereri vanonangwa, zvakakosha kuti kudyidzana kuve kwechokwadi, zvichibva pane zvinofarirwa, zvinangwa, uye masitayipi. Vateveri vanogona kuona zviri nyore kuburikidza neachokwadi anotsigirwa mameseji kubva kune vanofurira uye panguva imwe chete, vapesvedzera vava neumbozha hwekuramba zvibvumirano zvekutsigira izvo zvisingaenderane nemhando yavo.
Kuti brand itange hukama hwenguva refu nevanonyanya kupesvedzera pamushandirapamwe wavo, maererano nemukurumbira uye ROI, vanofanirwa kuchengeta matipi anotevera mupfungwa pavanenge vachitaurirana kune avo vanonyanya kudiwa pesvedzero.
Tsvakurudza anofurira usati wasvika
Shandisa maturusi ekutsvagisa uye enjere kuona vapesvedzera vanowirirana nevateereri vako uye vane chekuita nerudzi rwako. 51% yevapesvedzera vanoti chikonzero chavo chepamusoro chekusabatana nemhando inoswedera kwavari ndicho ichocho havadi kana kukoshesa chiratidzo. Kugadzirisa runyorwa rwevapesvedzera vanonyatso enderana nehunhu hwemhando ichave nemhedzisiro yakanaka pamushandirapamwe, sezvo zvavanotumira zvichave zvechokwadi kune vateereri vavo, uye ivo vanogona kushanda newe pakutanga.
Mabhureki anofanirwawo kushingairira kuongorora mhando yevateereri veanofurira sezvo paine maakaundi mazhinji anogona kunge aine vateveri vechokwadi. 45% yepasi rose Instagram account inotarisirwa kuve bots kana maakaundi asingashande, saka kuongorora hwaro hwevateveri vevateveri chaivo vanogona kuona kuti chero bhajeti rinoshandiswa rinosvika vatengi chaivo, vangangove vatengi.
Gadzirisa meseji yako
Vanofurira havana kushivirira, uye havafanirwe, kana zvasvika pakusvikirwa nemhando dzine generic, kucheka uye kunama mameseji mameseji, pasina chero hunhu kwavari kana chikuva chavo. 43% vakataura kuti usatombogashira mameseji emunhu kana kashoma kubva kumabhurandi, uye nekuwanda kwevanofurira ruzivo vanowanzogovana online, mabhureki anogona kushandisa izvi zviri nyore kune yavo kuti vagadzirise inzwi ravo.
MaBrand anofanirwa kupedza nguva nesimba achiverenga kuburikidza neavo evapesvedzeri 'zvirimo kuitira kuti vagadzire meseji inorongedzerwa kune yega yega pesvedzero, inoenderana ne toni yavo uye chimiro. Izvi zvichawedzera mukana wekuti anofurira ari mubvunzo abvume mubatanidzwa, uye ave nekukurudzirwa kutumira zvirimo zvinobatika.
Iva akajeka pakutaura kwako kwekutanga
Usarove pasango - kujeka, uye kubuda pachena kwakakosha kana uchinge uchikurudzira mazwi ekudyidzana kwako nemunhu anofurira. Paunenge uchiitisa yako yekutanga kuparidzira, iva nechokwadi chekugadzirisa chimiro kumberi kunosanganisira zvakakosha sekuti chii chigadzirwa, nguva yekutumira, bhajeti, uye zvinotarisirwa zvinounzwa. Izvi zvinoita kuti mupesvedzeri aite sarudzo ine ruzivo, nekukurumidza uye inobvumira mapato ese kudzivirira kupokana munzira.
Izvo zvakakosha kuti mabhureki abate toni chaiyo mukutaurirana kwavo kune vanofarirwa vanofurira kuitira kuchengetedza zvine musoro, kudyidzana kwechokwadi uye zvirinani kushambadzira kwavo. Sezvo indasitiri yekushambadzira inopesvedzera ichiramba ichibudirira, mabhureki anozofanira kuenderana nawo.
Tags: sei kutinzira yekutaurirana nevanofuriramaitiro ekumisa anopesvedzerahypeauditorkuchinjakushambadzira kushambadzira
Alexander ndiye CEO uye co-muvambi paHypeAuditor. Alex akagamuchirwa kakawanda paPamusoro 50 Maindasitiri Vatambi Rondedzero neKutaura Kukurudzira kwebasa rake rekuvandudza kujekesa mukati meiyo inosimudzira indasitiri yekushambadzira. Alex ari kutungamira nzira mukuvandudza kujekesa mukati meindasitiri uye akagadzira yakanyanya yepamusoro AI-yakavakirwa kubiridzira-yekuona sisitimu yekumisikidza muyero wekukonzera kukurudzira kushambadzira kwakanaka, pachena, uye kunoshanda.